Da'da Da'da Samurais waxay ugaarsi u tahay dagaalka seefta xeeladeed | Androidsis
Da'da Da'da Samurais waa ciyaar xeelad dagaal oo seef la dagaal ah taas oo ah inaynu ogaanno sida loo jaro xilliga saxda ah ee weerarka. In yar oo ka mid ah qaabka Skyrim iyo ciyaaraha kale ee aan ku cabirayno daqiiqadaas labadaba inaan ku weerarno seefteenna iyo inaan iska difaacno xannibaadda.
Ciyaar timaadda illaa Android leh muuqaal muuqaal weyn taasina waxay bixisaa halo-ciyaarkaas weyn ee ciyaarta oo saacado badan lagu caayo iyadoo aan si dhib leh loo dareemin in waqtigaas la dhaafay. Waa wax layaab leh oo ku soo dhacaya Google Play Store si aad ula socoto xiisaha samurayaasha samurai ee Japan ee waagii hore.
1 U safri Japan ee halyeeyada
2 Da'da Da'da Samurais a la Dil Bill
3 Hubka Jabbaan ee nooc kasta leh
U safri Japan ee halyeeyada
Mid ka mid ah fikradaha ugu fiican ee laga sheegi karo Da'da Da'da Samurais waa anigoo og sida loo wareejiyo halyeeyadaas oo dhan iyo qarsoodiga ah ee had iyo jeer ku hareeraysan Japan qarniyadii hore. Cawskaas dhaadheer ee aan dhaqdhaqaaqa ka joogsan waa mid ka mid ah walxaha garaafka ee awoodda u leh inay sirtaas noogu soo gudbiyaan.
Da'da Da'da Samurais waxay soo jeedineysaa dagaal seef xeeladeed oo aan ku qasbanahay si xikmad leh u cabiro dhaq dhaqaaq kasta oo aan sameyno. Iyo, haddii aynaan garaacno garaacis wanaagsan seefteenna, waxaan uga tagi doonnaa difaacyadeenna daah la'aan si markaas cadowgu uga hortago una awoodo inuu la kulmo dharbaaxo isdaba joog ah.
Halkani waa meesha weynaanta ciyaartani ku taal Ciyaaraha NoTriple-A waxaa ku dhejiyay Android iyo kaas oo kujira mid ka mid ah kuwa ugu fiican nooca sannadihii la soo dhaafay. Runtu waxay tahay inay tahay wax lagu farxo maaddaama samuuraydu ay awood u leedahay inay soo gudbiso dhaawacyadaas halista ah ee dhiiggu ku daadanayo qaabka ugu badan ee Dilka Bill.
Da'da Da'da Samurais a la Dil Bill
Jaangooyooyinkii animation ee samurai si fudud ayaa loo xusuustaa. Dhaqdhaqaaqyo jilicsan, leexasho lama filaan ah iyo fiisikis Taasi waxay naga dhigeysaa xitaa inaan karno culeyska culeyska seefta. Waana inaan xitaa heli karno seefo cusub oo leh waxyeelo intaa ka badan iyo dhaqdhaqaaq wanaagsan oo ka dhigaya samurayagu inay gaaraan mashiinka dilka birta ah ee gacanta ku jira.
Sumcada kale ee Da'da Da'da Samurais waa goobaha kala duwan halkaasoo dagaalka seefta xeeladeed lagu sheegi doono taas oo aan ka heli doonno madaxda ugu dambeysa ilaa kooxaha cadawga oo isku dari doona dharbaaxo sax ah oo lagu daro dhowr. Waa inaan isticmaalnaa xannibaadda iyo xitaa dhaqdhaqaaqa duulimaadka ama laad xirfad leh oo jahwareeriya cadowga.
Sidoo kale waa inay muuji sirdoonka macmalka ah ee cadawga taas oo kordhin doonta marka aan ku sii socono heerarka kala duwan. Way wareegi karaan, dhinac u weerari karaan, weerar celis, iyo xitaa xannibayaan garaacistaada. Xitaa waxaad arki doontaa iyaga oo ka falcelinaya geerida askartooda iyo xitaa tilmaamo siyaabo kala duwan ah marka dagaalku socdo.
Hubka Jabbaan ee nooc kasta leh
Waxaan horay u sheegnay inaad awoodid inaad hesho seefo cusub. Dhexdooda waxaad ka heli doontaa a arsenal wanaagsan oo seefaha Jabbaan ah sida katanas. Laakiin sidoo kale waxaad ku heli kartaa geesiyaal cusub oo samurai ah oo leh tirooyin iyo dhaqdhaqaaqyo wanaagsan. Waxaas oo dhami waxay ku qotomaan jawi dhawaaq iyo jawi hagaagsan leh oo ay ku galaan dagaalada seefta.
Da'da Da'da Samurais waa ciyaar farsamo ahaan aan caadi ahayn. Waxay si weyn u xoojineysaa qaabka muuqaalka iyo animations ee dhammaan jilayaasha ee ka muuqda shaashadda. Si aan mar labaad ugu nuuxnuuxsanno bay'adaha ciiryaamo waagaas iyo cowska dhaadheer ee had iyo jeer dhaqaaqa. Iyo "dhimashooyinka" waa in la xasuustaa sidii ay ugu jireen Mortal Kombat. Waa mid ka mid ah cinwaannadaas si looga yaabiyo asxaabta iyo asxaabta, sidaa darteed waxay durba qaadataa waqti lagu rakibo.
Da'da Da'da Samurais waxay la timid balanqaadyadii ugu fiicnaa iyo tan ugu fiican ee dhammeeya si ay u noqoto ciyaarta dagaalka taatikada ee seefta samurai. Ma jiro wax kale oo lamid ah oo ka jira Google Play Store. Waxaad halkaas ku haysataa bilaash inaad ku raaxaysato, by la mid ah seefo kale, laakiin arcade badan.
Da'da Glor Samurais
Dagaalku waa toban
Animations waa qumman yahay si kasta
Jaantus ahaan waa cajiib
Taasi kuma haboona qaabka 18: 9
Da'da ammaanta - Samurais
Developer: Ciyaaraha NoTriple-A
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Seefta xeeladeedu waxay la dagaallameysaa a 'Dil Bill' xilligii ugu fiicnaa Da'da Da'da Samurais